घोडे जात्रा - चैत्र कृष्णपक्ष औँसी - नेपाली पात्रो | Nepali Patro
नेपाली पात्रो > चाडपर्व > घोडे जात्रा
घोडे जात्राको उत्सव प्रत्येक वर्ष काठमाडौँको मध्य भागमा अवस्थित टुँडिखेलको फराकिलो मैदानमा चन्द्रमास अनुसार चैत्र कृष्णपक्ष औँसीको दिनमा मनाईंन्छ। “घोडे जात्रा” लाई अङ्ग्रेजीमा “हर्स परेड” भनी अनुवाद गर्न पनि सकिन्छ । नेपाली सेना र प्रहरीहरू मिलेर आयोजना तथा प्रदर्शन गरिने घोडे जात्रा ऐतिहासिक रूपमा धनी विद्या हो, जुन काठमाडौँ सहरको पुरातनता र पुरानो संस्मरणमा केन्द्रित रहेको छ। यो अवसर अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार मध्य मार्च वा अप्रिल-मार्च महिनाको मध्य तिर हुन्छ। यो जात्रा सुरु गर्नु अघि टुँडिखेलमा रहेको सैनिक मञ्चमा राष्ट्रप्रमुख उपस्थित भई जात्रा अवलोकन गर्ने प्रचलन छ |
घोडे जात्रा पहाचरे पर्वमा पर्दछ। पहाचरे नेवार समुदायको तीन दिवसीय महोत्सव हो र नेवारी भाषामा पाहुनाहरूलाई आमन्त्रित गर्ने प्रचलनलाई पहाचरे भनिन्छ। यस अवसरमा कन्केश्वरी, भद्रकाली र महान्काल लगायत विभिन्न देवदेवीका शक्ति पीठहरू तान्त्रिक संस्कारबाट सक्रिय गराइन्छ। पहिलो दिन, मानिसहरूले लुकुमहादेवको पूजा गर्दै आफ्नो घर ’round सफा गर्छन् र केही व्यक्ति जनावर बलि पनि दिन्छन्। दोश्रो दिन असनमा एउटा चाड सुरु हुन्छ जहाँ अन्नपूर्णा मन्दिरको छेउमा दुई पालकी (खट) एक अर्काको साथ ठोक्काइन्छ। यसलाई दिदी बहिनीहरू भेट्ने प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। साँझमा देवीको मूर्तिहरू सहरको चारैतिर खटमा परिक्रमाका लागि लगिन्छ। देवी लुमालडी, भद्रकाली, कनकेश्वरी र भैरवको मूर्तिहरू असन चौकमा दिनको मुख्य उत्सवमा र राती टुँडिखेलमा ल्याइन्छन्। यस दिन यी भगवानहरु एक साथ हरेक वर्ष भेला हुन्छन्।
प्राचीन मध्य युगमा काठमाडौँका बासिन्दा हरूलाई आतङ्कित गर्ने प्रेतको कथाले नेपाली संस्कृति र परम्परा कसरी व्यवहारिक, अद्वितीय र स्पष्ट रूपमा धनी छ भनेर बताउँछ भने पर्व मनाउनुको कारण पनि रमाइलो रहेको छ ।
घोडे जात्रा इतिहास
यो कथा हजारौँ वर्ष अघि काठमाडौँको ईटुँ बहाल, मा सुरु हुन्छ जहाँ केशचन्द्र नामका एक धनी व्यापारी र ऊनी बडो बुद्धिमान व्यक्ति समेत थिए । तर , दुर्भाग्यवश केशचन्द्रको जुवा खेल्ने समस्या गम्भीर थियो र हरेक दिन जुवा खेल्ने गर्थे। एक विशेष जुवाको खेल अत्यन्तै गलत भयो तब केशचन्द्रले आफूले पाएको सबै चीज गुमाए। त्यसपछि उसले आफ्नी दिदीलाई भेट्ने निर्णय गर्‍यो। उनका दिदीको धनी श्रीमान् सँग विवाह भएको र प्रशस्त पैसा ले पुगेको थियो। दिदी कान्छो भाइ भेट्न आएकोमा धेरै खुसी भएर उनीले मीठो खाना पकाई तुल्याई भाइलाई सुनको थालमा खाना खुवाएर उनको सेवा गरिन्। केशचन्द्रले खाना खाए, पेट भरी र फेरि धूर्त काम गरे, उसको दिदीको सुनको थाल चोरेर बाटो लागे ।
यो नयाँ सम्पत्ति, सुनको थालले आफ्नो गुमेको पैसा फिर्ता जित्ने आशामा ऊ फेरि जुवा खेल्न थाल्छ तर अफसोस यस पाली पनि केशचन्द्रको भाग्यले साथ दिँदैन र उसले आफ्नी बहिनीको सुनको थाल पनि जुवामा हार्छ। गरिब केशचन्द्रको अरू कतै जाने ठाउँ थिएन, उसले फेरि आफ्नी दिदीकोमा फर्कने निधो गर्छन् । रातो अनुहारको साथ, उनले आफ्नी दिदीको ढोका ढकढक्याए पछि उनको दिदीले कान्छो भाइ फेरि किन आए भन्ने अडकल लगाउँछिन् र केशचन्द्रलाई उसले गरेको कामको लागि माफ गरी, फेरि स्वादिष्ट खाना पकाउँदै, उनले यस पटक चाँदीको थालमा उनको सेवा गर्छिन्। केशचन्द्रले चाँदीको थाल चम्किरहे सम्म खान खान्छ तर “नानी देखि को बानी” भनेझैँ उसले त्यो चाँदीको थाल पनि चोरेर फेरि जुवा खेल्न जान्छ र फेरि पनि त्यो थाल जुवा मा हार्छ ।
त्यस पछि उसलाई आफू एउटा चट्टान र पहरा जस्तो बिचको चेपमा च्यापिएको जस्तो भान हुन्छ। ऊ कतै मद्दत माग्न जाने स्थितिमा वा आफ्नी दिदीको घर फर्केर जान पनि लज्जित थियो। तर जब दिन बित्दै गयो, उसको पेटको भोक जोडले बढ्यो र अन्ततः उनी आफ्नो परिवारमा फर्किए। “मलाई माफ गर्नुहोस्”, उसले फेरि आफ्नो दिदीसँग माफी मागे, “म एकदम भोकाएको छु।” मलाई मद्दत गर्नुहोस्। ” केशचन्द्रको जुवा खेल्ने समस्या र उनले गरेको कामले गर्दा दिदी ज्यादै रिसाएकी थिइन, तर पनि भाइको लागि अर्को खाजा पकाइन। तर, यस पटक उनले कुनै थाल बिना खानालाई भूमिमा खसालिदिइन र भनिन् “यसले तिमीलाई पाठ सिकाउनु पर्छ!”।
पश्चात्ताप तथा, मन खिन्न र चित्त दुख्यो, केशचन्द्रको, उनले भूमिमा पस्किएको खाने कुरा खाएनन्। उनले उनका लागि पस्किएको भात सङ्कलन गरे, त्यसलाई कपडामा पोको बनाए र, थकित र भोको, केशचन्द्र पोको बोकेर स्वयम्भूनाथ तिर लागे। भोकै र थकित, आफ्नो चोर्ने र जुवा खेल्ने जस्ता खराब बानीहरूलाई सराप्दै उनले वनको एक रूखको छायामुनि आराम गर्ने निर्णय गरे र जङ्गलमा शीतल हावामा केशचन्द्र निदाए, रुखको छायाले उनलाई केही सान्त्वना पनि प्रदान गरेको थियो।
त्यो रूखको हाँगामा थुप्रै ढुकुर, परेवा हरू पनि थिए। चामलको एउटा पोको भुँइमा लडिरहेको थियो, ढुकुर- परेवा हरू एक एक गरी तल झरे र चामलको पोको बाट चामल खान थाले, र धेरै चाँडै नै- चामल सिद्धियो पनि। चामल सिद्धिए पछि परेवा- ढुकुर हरू फेरि रुखको आ- आफ्नो गुड मा फर्किए। र त्यसपछि, त्यस ठाउँ मा केही अनौठो कुरा भएछ । ती परेवा- ढुकुर हरूले केशचन्द्रलाई जानी नजानी चामल खान दिएका हुनाले त्यस कार्य प्रति कृतज्ञताको सङ्केतको रूपमा तिनीहरू सुनका अण्डाहरू पारे। जब पहिलो सुनौलो अण्डा जमिनमा खस्यो, केशचन्द्र झस्किएर बिउँझिए र देखे सुनको अण्डा वर्षा भइरहेको थियो! अन्तमा, अब भने आफ्नो भाग्य राम्रो हुँदैछ भन्ने विश्वास गर्दै उनले सबै सुनका अण्डाहरू सङ्कलन गरे र एउटा पोको बनाए । उनीसँग अब पहिलेको भन्दा अझ ठुलो पोको थियो; फरक भने चामलको सट्टा, सुनको। घर लान को लागि ऊनले पोको उचाल्न खोजे जति बल लगाए पनि उठाउन सकेनन् ।
केशचन्द्र त्यहाँ बसेर के गरेर त्यो पोको घर पुर्याऊने भनेर सोच्दै बसिरहँदा उनले एउटा विशाल राक्षस लामो लामो रातो लट्टा परेको कपाल, शरीरभन्दा टाउको ठुलो भएको आफै तिर आइराखेको देखे। उसको दाँतहरू मुखबाट बाहिर निस्केका धारिलो भएको केशचन्द्रले देखे। भूतले आफ्नो घाँटी वरिपरि दाउराका अनुहारहरू लगाएको थियो र जुन केशचन्द्रको टाउकोको आकार भन्दा पनि दुई गुणा ठुला थिए। ठुला ठुला हात र खुट्टा, राक्षस चाँडै आउँदै थियो र केशचन्द्रलाई देखेर “अन्त्यमा मैले आजको दिनको खाना फेला पारेँ!” भनेर राक्षसले चिच्यायो ।
यो “गुरुमापा”, पौराणिक राक्षस थियो जुन सहरका बुढा-बुढी, हजुरआमा हरूले अक्सर आफ्ना नाति-नातिना हरूलाई यो गुरुमापाको ’boutमा कथाहरू सुनाउँथे।
केशचन्द्र डरको साथ भाग्न सकेनन् ’cause उनीलाई थाहा थियो कि भूतले अवश्य नै उसलाई पक्रन सक्छ। तर, उसलाई अझै पनि आफ्नो बुद्धिको ’boutमा घमण्ड थियो र त्यो क्षणमा उसलाई थाहा थियो कि ऊ बाँच्नको लागि हो भने उसको दिमाग उसको सबैभन्दा उत्तम चाल हो। त्यसै विचारगरि उनले कराए “गुरुमापा! गुरुमापा! कृपया मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्! “, केशचन्द्रले अनुरोध गरे , ” म एक सजाय पाएको लिखुरे लाई खाएर तपाइको भोक मेटिन्न । बरु म तपाईँलाई मेरो घर निम्ताउँछु, जहाँ म तपाईँको सम्मानमा ठुलो भोजको व्यवस्था गर्छु र अहिले नै हजुरलाई निमन्त्रणा गर्छु । एक पूर्ण भैँसी र तीन ठुला चामल का बोरा, तपाईँका लागि, मेरो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुस् ! यदि तपाईँ मलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, यो सुनौला अण्डाको पोका लिनुहोस् र यसलाई समात्नुहोस्। जब तपाईँ मेरो निमन्त्रणा बाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तब मात्र तपाईँ यो पोको फर्काउनु सक्नुहुन्छ ।
त्यो सानो मानव जस्को सबै छाला र हड्डीहरू मात्र देखिन्थ्यो, उसको बोली सुनेर, गुरुमापाले विचार गरे, र भने “ठिक छ मानव, म तिम्रो सम्झौतामा सहमत छु”, गुरुमापाले भने, “बाटो हिँड्नुहोस् र म अनुसरण गर्नेछु”। सुनौला अण्डाको पोको बोक्दै गुरुमापाले केशचन्द्रको अनुसरण गर्न सुरु गरे जसले राक्षसलाई सहरको बाटो हुँदै उसको घरमा लगे। जब तिनीहरू अन्तमा घर पुगे, केशचन्द्रले पोको बाट एउटा सुनको अण्डा लुकाएर त्यसलाई बेची उनले बोसे भैँसी र तीन ठुला चामलको बोरा किनेर राक्षसको सेवा गर्न एक भोज गरे।
उनको भोजबाट खुसी भएर, गुरुमापाले सुनौला अण्डाहरूको पोको केशचन्द्रलाई फर्काइदिए र भोज मज्जाले खाए। केही घण्टामा, भोज सिद्धियो, र सिद्धियो तीन ठुला चामलका बोराहरू पनि । केशचन्द्रले सोच्यो, अब गुरुमापा चिसो भएपछि काठमाडौँको जङ्गल तिर फर्किनेछ। तर उनको बिचार को विपरीत त्रासको अवस्था सृजना भयो, सोचे भन्दा ठिक उल्टो, गुरुमापा दानवले निर्णय गरे कि उसलाई केशचन्द्रको घर पछाडिको स्थानमानै बस्न मन पर्थ्यो र त्यहीँ सुत्न पनि। गुरुमापा केशचन्द्रको बारीमा तीन दिन र तीन रातसम्म निदायो।
जब उ चौथो दिनमा बिउँझियो, र अरू खानेकुराहरू पहिला झैँ व्यवस्था गरिदिन भन्यो। आफ्नो जीवनको भय र सहरमा हुनसक्ने हुलदङ्गा ले गर्दा मानिसहरू डराउने छन् र मानिसहरूले यदि उनले राक्षस गुरुमापालाई खुवाउने र बस्न समेत दिएको थाहा पाए विपत आउने त्रासले उनी राक्षस को कुरामा सहमत भए। र यसरी पुरै महिनासम्म चल्यो। भूतले खाएको थियो र तीन दिन सम्म निदायो। उ ब्युँझने भएपछि, केशचन्द्रले फेरि भूतको भोजनको व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो र यो चक्र महिनौं सम्म जारी रह्यो ।
अहिलेसम्म सहरका मानिसहरूले केशचन्द्रको घरमा रहेको अनावश्यक पाहुनाको ’bout ध्यान दिन थालिसकेका थिए। र उनीहरुले भने, केशचन्द्र जी “तपाईँको घरमा रहेको यो भूत हो, यो स्वागतयोग्य छैन “, र भने, “तपाईँले उसलाई मुक्त गर्नुपर्दछ, यो राम्रो अन्त्य हुन्छ, नत्र पछि झन ठुलो समस्या आउने छ ।” केशचन्द्र डराएका पनि थिए र सोचे, “मैले वास्तवमै केही सोच्नु पर्छ”, किनकि उनलाई गुरुमापाले पनि चाँडै वा ढिलो अप्रत्याशित कुरा गर्न बाध्य पार्नेछ भनेर थाहा थियो।
एक दिन, राक्षसले खान खाए पछि सुस्ताएको बेला राम्रो मौका हेरी “गुरुमापा तिम्रो लागि नयाँ घर छ,” केशचन्द्रले राक्षसलाई भने , “मैले तिमीलाई टुँडिखेलको छायादार पिपल को रूखमा बस्नको लागि व्यवस्था गरेको छु। तपाईँ त्यहाँ सजिलो महसुस गर्नुहुनेछ र म तपाईँसँग चार दिन पछि खाना लिएर आउनेछु। ‘ मानवलाई विश्वास गर्दै , गुरुमापा सहमत भए, आखिर, यस मानवले उसलाई यति राम्ररी सेवा जो गरेको थियो। ऊसँग अब खराब खेल खेलिने कुनै कारण उसले देखेन। केशचन्द्रको अनुरोधमा, गुरुमापा टुँडिखेलको पिपलको रूखको हाँगामा बस्न गयो।
जब ऊ तेस्रो दिनमा निद्राबाट ब्युँझ्यो, उनले केशचन्द्र त्यहीँ खाना लिएर आएको आशा मा थियो तर, त्यसो नभएको पायो। त्यहाँ खाना थिएन। उसले केही दिन पर्खियो, तर केशचन्द्र को यो अनुपस्थितिको कारण उ रिसायो। काठमाडौँको चोकमा हिँड्दै उ केशचन्द्रको घरतर्फ लाग्यो। केशचन्द्रलाई गुरुमापाले तानेर पिपलको रूखतिर फर्काएर ल्यायो। र मान्छेहरूले केशचन्द्रलाई फेरि कहिल्यै देखेनन्।
तर, सहरका मानिसहरूले देखेका भूतहरूको त्यो अन्तिम भाग थिएन। गुरुमापा प्राय: जसो सहरमा आउँथ्यो र मानिसहरूलाई डराउँथ्यो । कहिलेकाहीँ साना बच्चाहरूलाई लिएर जाने र तिनीहरूका आमा बुबाले उनीहरूलाई फेरि कहिल्यै नदेख्ने यस्ता घटनाहरू धेरै हुन थाल्यो। उसले काठमाडौँका जनतालाई आतङ्कित गर्न थाल्यो। “तिमी रोयौ भने गुरुमापा भूतले तिमीलाई लानेछ,” हजुरआमा तथा आमाहरूले आफ्ना नातिनातिना – छोराछोरी हरूलाई यसो भनी चुप लगाउने गर्थे । यो सहरका मानिसहरूका लागि अब सुरक्षित थिएन र कसैले पनि टुँडिखेल वा पिपल रूखको नजिक जाने हिम्मत गरेनन्, भूतले आक्रमण गर्ने डरले।
गुरुमापाको काठमाडौँ मा दिनानुदिन बढ्दै गएको आतङ्क अति भए पछि अन्तमा, काठमाडौँबासीहरूले, गुरुमापाको आतङ्कको शासन लिन सक्दैनौँ, भन्दै जनताले आक्रोशित भीड गठन गरे। खुकुरीहरू, तरबारहरू र तोप जस्ता भेट्टाउन सकेका जुनसुकै हतियारहरू सहित उनीहरूले गुरुमापा लाई टुँडिखेलको खुला मैदानमा पुर्‍याउथे, तर उ फेरि सहरमा आउँथ्यो। लाठी र ढुङ्गाहरूको साथमा मानिसहरूले उसलाई तल ल्याउन चिसो वस्तुहरू फ्याँके, तर त्यसले केही खास असर गरेन, मानिसहरूले दुष्टात्मालाई जति जे गरे पनि गुरुमापा फेरि खडा हुन्थ्यो । अन्तमा, मानिसहरूले दुष्टात्मा माथि घोडाहरूको भीड छोड्ने निधो गरे । घोडाहरूका भगदडले गुरुमापालाई भुईँमा कुल्चे, र जब भगदड पछि उडेको धुलो बस्न थाल्यो, तब भूत पहिले जस्तो उठेको देखिएन । महिनौँदेखि चलिरहेको यो भूतको आतङ्क समाप्त गर्दै, मानिसहरूले त्यसलाई मारिदिए।
तर पनि मानिसहरूलाई डर थियो कि गुरुमापा फेरि सहर आउनेछ; त्यसै कारण टुँडिखेलमा हरेक वर्ष घोडा चढ्ने विधि सुरु भयो । पछि, समय बित्दै जाँदा, यो अनुष्ठान “घोडे जात्रा” भनेर चिनिन थाल्यो। यस रीतिथितिमा पछि विभिन्न परेडहरू थपिए र यो एक उत्सवको रूपमा परिणत भयो। नेवार समुदायको उत्सवको विभिन्न भिन्नता छ र त्यहाँ अन्य धेरै विद्या र किंवदन्तीहरू छन् जुन कथाहरुलाई फरक तरिकाले वर्णन गरिन्छन् ।
तर जे जस्तो भए पनि केहि फरक पर्दैन, ’cause सहरको विगत र यसको इतिहास झल्काउने कुराहरु अझै जीवित छन र आशा गरौं सदैव जीवित रहनेछन तथा मानिसहरूले हरेक वर्ष चन्द्रमास अनुसार चैत्र कृष्णपक्ष औँसीको दिन राजधानीमा घोडे जात्राको उत्सव देखाउँदै र हेर्दै उक्त समयमा घटेको गुरुमापा र केशचन्द्रलाई याद गर्छन् र गरिरहने छन्।